‘लाहुरे’को बोली होईन, गोली ‘ताण्डव’ ! (भिडियो बोल्छ) « Mazzako Online
‘लाहुरे’को बोली होईन, गोली ‘ताण्डव’ ! (भिडियो बोल्छ)
र्यापर लाहुरेको बोलीले युवापुस्तामाझ ताण्डव मच्चाएको छ । तर, अब भने उनको बोलीको मात्र होईन गोलीको पनि ताण्डव हेर्न पाईने भएको छ । ‘लाहुरे’ अर्थात आशिष राना पोखराका हुन् । अब उनले राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय रुपमै गोलीको ताण्डव देखाउने छन् चलचित्र ‘ताण्डव’ मार्फत । लाहुरेले पहिलो पटक अभिनय गरेको चलचित्र ‘ताण्डव’ प्रर्दशनको लागि तयार भएको छ । विहिबार राजधानीमा चलचित्रको बारेमा जानकारी गराउन पत्रकार भेटघाटको कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । सो अवसरमा चलचित्र ‘ताण्डव’को ट्रेलर समेत सार्वजनिक गरियो ।
नेपालको तराई भेगमा हुने हात हतियारको अवैधानिक प्रयोग र त्यसले निम्त्याएको जोखिमलाई चलचित्रमा देखाउन खोजिएको छ । स्म्यासिङ्ग एप्पलको ब्यानरमा बनेको चलचित्र ताण्डवको निर्माण मोहन डोटेलले गरेका हुन् । ‘यसपाली विशुद्व मनोरञ्जनात्मक र ब्यबसायिक चलचित्र बनाउने कोशिष गरेका छौ’ निर्माता डोटेलको भनाई यस्तो छ । डोटेलले यसअघि चलचित्र ‘बधशाला’ बनाएका थिए ।
चलचित्र ताण्डवलाई बेलायती निर्देशक मुर्रे केरले निर्देशन गरेका हुन् । यसअघि उनले नेपाली बिषयकै फिल्म ‘सिक सिटी’ निर्देशन गरिसकेका छन् । निर्देशक मुर्रे केर फिल्मलाई लिएर निकै उत्साहित देखिएका छन् । ‘ताण्डव’ ले दर्शकलाई पक्कै पनि मनोरञ्जन दिनेछ उनले भने । त्यस्तै, चलचित्रमा पहिलो पटक काम गरेका लाहुरेका अनुसार फिल्मको सुटिङ्गमा निकै रमाईलो भयो रे । उनले फिल्मको लागि नै भनेर बक्सिङ्ग सिकेको पनि जानकारी गराए ।
चलचित्र ‘ताण्डव’ मा र्यापर लाहुरेका अलावा, नायिका नम्रता श्रेष्ठ, अनुप बराल, एलिन गुरुङ, विपिन कार्की, प्रमाद अग्रहरी लगायतको अभिनय रहेको छ । चलचित्र ताण्डब भदौ ६ गतेबाट प्रर्दशनमा आउदैछ । चलचित्र सोही डेटमा हङ्गकङ्ग, जापान र युकेमा समेत प्रर्दशन गरिदैछ ।